အထက်အမိန့်နဲ့ မြေပြင်အခြေအနေ လွဲနေသေးတဲ့ မြန်မာပြည် (အမိန့်သာ ထုတ်ပြီး လုပ်နည်း မပါရင် ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်) - Zet Star
အထက်အမိန့်နဲ့ မြေပြင်အခြေအနေ လွဲနေသေးတဲ့ မြန်မာပြည် (အမိန့်သာ ထုတ်ပြီး လုပ်နည်း မပါရင် ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်)
ဟာသလို့ပဲပြောရမလား, အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်တယ် လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူး
ခုလေးတင် အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ သွားပြီး အပြင်က ပြန်လာတာ အနော်ရထာလမ်းတလျှောက် ကားမောင်းပြီးပြန်လာတယ်.. တယောက်ထဲပါ.. ဘယ်သူ့မှကားပေါ်မပါဘူး.. မှန်လုံပိတ်ပြီးမောင်းလာတာ.. ဂျန်းရှင်းမော်တင် အရှေ့လည်းရောက်ကော အတားခံလိုက်ရတယ်. ပြီးတော့ ကိုယ့်ကားပေါ်မှာ အမြဲဆောင်ထားတဲ့ mask အထုတ်ထဲက mask ယူပြီး မှန်ကိုနည်းနည်းချလိုက်တယ်. ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ ကားမောင်းတာ mask မတတ်လို့တဲ့..
​တယောက်ထဲမောင်းတာလေ.. ဘယ်သူ့မှမပါဘူးလေပြောတော့.. တယောက်ထဲမောင်းလည်း mask တပ်ရပါတယ်တဲ့.. mask မတပ်တဲ့အတွက် ဒဏ်ကြေး ၂၀၀ ကောက်ရပါမယ်တဲ့.. ဒီမှာ mask ယူသွားပါတဲ့..
နားမလည်တာက တယောက်ထဲ မောင်းနေတာကို အတင်းတားပြီး ဒဏ်ကြေးလိုက်ကောက်တာ ဘာလုပ်တာလဲဟင်? ၂ ယောက်ပါလို့ mask မတပ်ရင်လည်းထားပါတော့.. အခုက ကားပေါ်မှာ mask လည်းရှိတယ်.. face shield လည်း ဒက်ရှ်ဘုတ် ပေါ်မှာတင်ထားတယ်.. ဈေးသွားရင်တပ်ရအောင်လို့.. အရက်ပြန်လည်း ထားထားတယ်.. ပိုက်ဆံပြန်အမ်းရင် အပြင်ကပြန်လာရင် အိတ်တွေ ကားသော့တွေ ကားပေါ်မှ ာဖျန်းလို့ရအောင်.. ပြီးရင် လက်ပါဆေးလို့ရအောင် ဟန်းဂျယ် ပါတင်ထားတယ်..
အခုက တယောက်ထဲဘယ်သူမှလဲမပါလို့.. mask မတပ်ပဲမောင်းတာ .. တယောက်ထဲ မောင်းတော့ဘယ်သူ့ဆီကကူးမှာလဲဟင်? အရမ်းသိချင်ပါတယ်။
ဆက်မပြောတော့ပဲ ရော့ရော့ ဒီမှာ ၂၀၀ လို့.. အဲ့ဒါကို အမ မှန်လေးအဆုံးထိချပေးပါတဲ့.. မချပေးပါဘူးလို့.. အဲ့ဒီအပေါက်ကနေပဲ mask ပေးပြီး ၂၀၀ ယူပါလ်ု့.. ဟုတ်တယ်လေ.. အဆုံးထိချပေးမှ သူ့ဆီကရှိလည်းကူးနေအုန်းမယ်.. ကိုယ့်ဆီမှာရှိလည်းကူးနေအုန်းမယ်..
မချပေးနိုင်ဘူးပြောမှ ဪ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်တဲ့.. ဒါတောင်ဘေးနားက တယောက်ကို ပြောလိုက်သေးတယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်ဦး မလားတဲ့။ ဘေးက မရိုက်ဘူးပြောမှ.. ကိုယ်လည်းချထားတဲ့ မှန်အပါက်သေးသေးလေးကို မြန်မြန်ပိတ်ပြီး မောင်းထွက်လာရတယ်..
တကယ်သိချင်ပါတယ်… ဘာလုပ်တာလဲလို့.. ၂၀၀ ပေးလိုက်ရတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး.. တယောက်ထဲမောင်းတဲ့သူပါ..ဒဏ်ကြေးလိုက်ကောက်နေတယ်.. လူ ၂ ယောက်လောက်ပါလို့ mask မတပ်လို့ကောက်တယ်ဆိုထားအုန်း.. လက်ခံတယ်.. ပြီးတော့ လိုက်ကောက်တာလည်း သူတို့လူကြီးပဲ ၅-၁၀ ယောက်ကြားရှိတယ်.. ဝိုင်းကောက်နေတာ.. ပေးတဲ့mask တောင် ယူပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ရတယ်..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ကြီးနဲ့ mask ကို အားရပါးရကိုင်ပြီးပေးထားတာ.. အထဲဖက်ထားတဲ့ အဖြူဖက်အခြမ်းကိုပါလက်နဲ့ကိုင်ထားတော့ မသုံးရဲတော့ဘူး.. ပြီးရင်ကိုယ့်ဆီက ပိုက်ဆံယူလည်း ဒီလက်ပဲ..စဥ်းစားကြည့်ကြပါတော့
‎Zin Nwe Win‎
← Project K အဖွဲ့ရဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တေးရေး ရွှေဂျော်ဂျော် ဒဲ့ပြောပြီ
မြန်မာပြည် ကိုဗစ် တိုက်ဖျက်ရေးကို အီတလီက ဆရာဝန်ကြီးများ ပါဝင်ကူညီမည် →